မိုးရာသီထဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မိုးရာသီထဲ
Posted by အောင် မိုးသူ on Jun 19, 2017 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 21 comments
မိုးဆိုတာနဲ့ အမှတ်ရနေတာ အကျင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကလည်း မေ(31) မိုးတွေရွာတဲ့ နေ့မှာ မွေးခဲ့တာကိုး။ ဘဝမှာ အဲ့သီချင်းက တော်တော်လေး အမှတ်တရ ဖြစ်ခဲ့သေးတာ။
သီချင်းတွေထဲမှာလည်း မိုးရာသီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သီချင်းတွေဟာလည်း စွဲစွဲမြဲမြဲပါပါပဲ။
မနိုးပါစေနဲ့မိုးရယ် စတဲ့သီချင်းတွေဟာလည်း အခုအချိန်အထိ အမှတ်ရဆဲပါပဲ။
အသီးထဲမှာဆိုရင်တော့ မိုးတွင်းဆို သရက်သီး ၊ ဒူးရင်းသီးက ဘဝမှာ အမှတ်တရအဖြစ်ဆုံး အသီးတွေ။ ဘာလို့လဲဆို ကြိုက်တာကိုး။ နောက် သပြေသီး ငယ်ငယ်တုန်းက သပြေသီးဆိုတာကို မမြင်ဖူးဘူး။ အိမ်ပြောင်းတော့ ပြောင်းနေတဲ့ အိမ်နားမှာ သပြေပင်အကြီးကြီးရှိတာ မိုးတွင်း သပြေသီးတွေသီးတော့မှ သပြေသီးမှန်သိတော့တာ။ စပျစ်သီးလိုလို ဘာလိုလိုဆိုတော့ သိပ်ကိုသဘောကျခဲ့တာ အရသာကတော့ သူက ဖန်တာပိုကဲတာပေါ့။
မိုးရာသီမှာ အကြိုက်ဆုံးကတော့ မိုးအေးအေးနဲ့ ထမင်းပူပူ ဟင်းပူပူ စားရတာပါပဲ။ အဲ့သည်ထဲမှာ အမှတ်တရအဖြစ်ဆုံးကတော့ အိမ်ကချက်တဲ့ ပိန်းရိုးဟင်းခါးပါပဲ။ အိမ်နောက်ဖေးမှာ ပေါက်နေတဲ့ ပိန်းပင်အကြီးကြီးတွေကို ဆင်းခုတ်၊ အပေါ်ယံအကြောတွေနွှာ ရေသေချာဆေးပြီး (၂)ရက်လောက် ထောင်ထားလိုက်တယ်။ ပြီးရင်တော့ ပုစွန်ခြောက် ကြက်သွန်ဖြူ ငရုတ်ကောင်း ငါးအသားလေးနဲ့ ဟင်းခါးချက်သောက်ရတဲ့ အရသာက ဘာနဲ့မှ မတူအောင်ကောင်းတဲ့ ပိန်းရိုးဟင်းခါးပါ။ နောက်တစ်ခုက မေမေချက်ပေးတဲ့ ဟင်းချိုတစ်မျိုးပါ။ မလွတ်တာရီလို့ခေါ်သလား။ မလွတ်သနီလို့ခေါ်သလားတော့မသိပါဘူး။ ကုလားပဲကို ရေနဲ့ နူးနေအောင်ပြုထား ငရုတ်ကောင်း ၊ ငရုတ်သီးအနီတောင့် ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ဂျင်း ၊ မဆလာ ကို ထောင်းပြီး ပွက်ပွက်ဆူထဲထည့် ပျင်းတော်သိမ် လေးငါးခက်လောက် ချွေထည့်ပြီး ပဲတွေ နူးကြေလာလို့ ပွက်ပွက်ဆူလာရင် မန်ကျည်းရည်လေးဖျော်ထည့် မွှေးမှမွှေး ကောင်းမှကောင်းပဲ။ ကုလားပဲထက် ပဲနီလေး ပဲဝါလေးနဲ့ ချက်တာ ပိုများတယ်။ မိုးရာသီမှာတော့ ဟင်းချိုတွေ ဟင်းခါးတွေ အမှတ်ရတာ ပိုများပါတယ်။
နောက်ထပ်အမှတ်ရစရာတစ်ခုကတော့ မနေ့ကပဲ အစ်မအငယ်ချက်ကျွေးတဲ့ဟင်း ကြက်သားအရွယ်တော် အတုံးတွေတုံးပြီး အုန်းနို့နဲ့ ရေနဲ့ အရင်တည်ထား။ ကြက်သွန်ဖြူ ငရုတ်သီးစိမ်း စပါးလင်း ငရုတ်ကောင်းကို ထောင်းပြီးထည့် စပ်စပ်လေး။ ထမင်းလေးနဲ့နယ်စား လွှတ်ကောင်း။ အသီးအရွက်ကလေးတွေပါထည့်စားအရမ်းကောင်း။ နေ့လည်ဗိုက်ဆာတော့ မုန့်ဟင်းခါးဖတ်လေးဝယ် အဲ့ဟင်းအရည်နဲ့ အသီးအရွယ်ကလေးတွေနဲ့အဆာပြေစား လွှတ်ကောင်း။
မိုးရာသီထဲမှာ ပန်းကလေးတွေနဲ့ အမှတ်တရဆိုရင် ခရေပန်း နဲ့စံပယ်ပန်းတွေကို အမြဲသတိရမိတယ်။ မိုးစက်တွေကြောင့်ကျလာတဲ့ ခရေပန်းတွေကောက်ပြီး ရောင်းခဲ့ရတာရယ် မိုးတွင်းဆိုရင် အရမ်းပွင့်တဲ့ စံပယ်ပန်းတွေရယ်ကြောင့်ပါ။
မိုးရာသီနဲ့ပတ်သက်တာအများကြီးရှိပေမယ့်။ ဒီလောက်နဲ့ ခဏရပ်ပြီး နောက်ထပ် စာတွေရေးဖို့ ကြိုးစားနေပါကြောင်း။ မိုးရွာနေတုန်း မိုးရာသီမှာ ခံစားပြီး ရေးလိုက်ရပါတယ်။
မိုး သီချင်းတွေ ၊ မိုး ဘွဲ့တွေ ၊ မိုးတွင်း ရာသီစာတွေ အကုန်ကြိုက် …
နောက်ပြီး မိုးရွာလို့ အလုပ်နားရတာလည်း ကြိုက်သေးတယ် …
အဲ … ကိုအောင်မိုးသူပြောတာ ကြက်သား အုန်းနို့ … ထိုင်း Green Curry ထင်ပါရဲ့…
ခရမ်းကြွပ်သီး ခရမ်းကဆော့သီးတွေထည့် ပင်စိမ်းရွက်လေးအုပ် … ရှလွတ်စ်
ထိုင်းတွေလည်း အဲသည့်ဟင်းကို မုန့်ဟင်းခါးဖတ်နဲ့ စားတယ် …
ဟုတ်တယ် မုန့်ဖတ်နဲ့စားမယ်ဆို ခရမ်းကဆော့သီး သခွားသီး ပဲသီး ကန်စွန်းရွက် အစိမ်းတွေကိုပဲ လှီးထည့်ပြီးစားရတာ။
ချစ်တီးဆိုင်သွားစားရင်.. တောင်းသလောက်အလကား လိုက်ပေးတဲ့ ဟင်းချိုမို့လား..။
ထမင်းစားပြီး အအီပြေ ပူပူစပ်စပ်ချဉ်ချဉ်လေး …
ဝမ်းလည်း ကောင်းတယ် ၊ အင်အင်းလည်း လျှောလျှောရှုရှု …
အိန္နိယမှာတော့ စတီးမတ်ခွက်နဲ့ ထည့်တိုက်တယ် …
တောင်ပိုင်း ကရဲလား (Kerala State) စတိုင် ထင်တာပဲ …
အဲဒီ အချဉ်ဟင်းရည် အရမ်းကြိုက်တာပဲ..
မိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ် ထပ်ခါထပ်ခါ နားထောင်နေမိတယ်။
မီမီဝင်းဖေ ဆိုထားတဲ့ ”ရွာမယ်ဆိုရင်လေ”
”မိုးးးး ရွာမယ် ဆိုရင်လေ. . .
ခြိမ်းပြီးတော့မှ မရွာရင်. . .
ပျိုးးးး ပင်ပျိုငယ်တွေကို ပျိုးတဲ့ ရာသီမို့. . .”
ဘာရယ်မဟုတ်။ အခုတလော အအေးအရမ်းကြိုက်လာတယ်။ မိုးအေးတာက ဆောင်းအေးတာနဲ့ မတူသမို့ မိုးအအေးနဲ့ ကွေးရတာကို သဘောကျနေတာရယ်။
မိုးတွင်းစာတွေ ပဲ ကြိုက်တယ်။
မိုးရာသီကို ချစ်တယ်.. (ငယ်ငယ်တုန်းက)
ခု ရန်ကုန်မှာ မိုးတွင်းဆို ရေတွေလျှံ.. ပလပ်ဖောင်းပေါ်က ဆိုင်ခန်းတွေရှောင်ရ.. ကားတွေပိတ်..
ရေးနေရင်း ဟင်းခါးပူပူလေး သောက်ချင်တယ်.. ခရေပန်းကောက်ချင်တယ်..
မိုးရွာပြီဆိုတာနဲ့ ရေကြီးရေလျှံတဲ့ ကိစ္စအပူလုံးကြီးကတက်တက်လာတယ်
မြေသင်းနံ့ ရတာနဲ့ တင်မြေကြီးထဲကနေထိုးထွက်လာပြီးပွင့်တယ်။
အခုတောင်သတိရလို့ ဒီနေ့ ငါးပေါင်းထုပ်လုပ်စားဖို့ အတွက်ရွက်ယိုရွက်တောင်ခူးထားပြီးပြီ။
ရွဲရိုရွက်ငါးပေါင်းထုပ်စားဖို့ ရွဲယိုရွက် ရှာရတာ အမောပဲ
အဲဒီဟင်းရည်​ကို မနုတ်​သနီ လို့​ခေါ်တယ်​ မှတ်​တာဘဲ။ ချစ်​တီးထမင်းနဲ့ အတွဲ​ပေါ့။ တခြားဘယ်​လို​ခေါ်တယ်​​တော့မသိဘူး။ မိုးသီချင်း​တွေကြိုက်​တယ်​ ဒါ​ပေမဲ့ အညာသားမို့ မိုးတွင်း​တော့မကြိုက်​ဘူး ထီး​ဆောင်​ရ မိုးကာဝတ်​ရနဲ့ စက်​ဘီးစီးရတာ အဆင်​မ​ပြေဘူးရယ်​။
နာ့ပို့စ် ဖတ်မလား မိုးသည်းထဲမှာ တဲ့
ဟိုနေ့ကမိုးအေးအေးနဲ့ ကရင်တာလဘော့ (ထပ်ကပေါ) ချက်သောက်သေးတယ် ။
ဓတ်ပုံရိုက်ပြီး ပို့စ်တင်မလို့ဟာ မေ့သွားတာနဲ့